धुलिखेल अस्पतालमा पहिलो पटक बंगाराको जोर्नी प्रत्यारोपण सफल, युवतीको मुहारै फेरियो • Health News Nepal
धुलिखेल अस्पतालमा पहिलो पटक बंगाराको जोर्नी प्रत्यारोपण सफल, युवतीको मुहारै फेरियो
धुलिखेल, २८ जेठ २०७९
नेपालमा धेरै मानिसहरू लड्दा च्यापु ठोकिएर हुने मुखको गम्भीर समस्याको पहिलो पटक धुलिखेल अस्पतालमा शल्यक्रिया सफल भएको छ ।
मुख खोल्न, चपाउन, बोल्नका लागि नभईनहुने कानको नजिकै (कन्चट) मा जोडिएको दुबैतर्फको जोर्नीमा गम्भिर क्षति पुगेकी एक २२ बर्षिय युवतीको (टेम्पोरोमन्डिबुलर जोर्नी प्रतिस्थापन) शल्यक्रियामा धुलिखेल अस्पताललाई सफलता मिलेको छ । झण्डै ८ घण्टा लगाएर गरिएको शल्यक्रियापछि युवतीको मुहारै फेरियो ।
काठमाडौ कपनकी ती युवती ज्योत्सना अर्याल साढे २ बर्षको उमेरमा बाग्लुङमा लड्दा च्यापुको हड्डीमा चोट लागेको थियो । उनको कन्चटमा रहेको दुबै भागको जोर्नीमा असर परेको र नाक र कानबाट रगत बगेको अवस्थामा बाग्लुङमा उपचार सम्भव नभएपछि पोखरा रिफर गरियो । त्यहाँ ल्याई परिक्षण गर्दा टाउँकोमा भित्र रगत नजमेको र ठूलो चोट नलागेको बताएपछि छोरीको समस्याका बारेमा ढिलो जानकारी भएको ज्योत्सनाका बुबा हेमन्द्र अर्याल बताउँनुहुन्छ ।
हेमन्द्र भन्नुहुन्छ-बाल्य अवस्थाको पिडादायि घटनाको समयमै पहिचान हुन नसक्दा विस्तारै विस्तारै छोरीको मुख खुल्नै गाह्रो हुनुका साथै च्यापुनै सानो हुँदै गयो । १२ बर्षको उमेरमा बीएण्डबी अस्पतालमा पुन परिक्षण गर्दा उनको मुख खोल्दा चल्नुपर्ने जोर्नी कन्चटमा रगत जमेर हड्डी बनेर जोर्नी नै पुरिएको पत्ता लाग्यो । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार छोरीको मुख खोल्न सहज बनाउनका लागि बीएण्डबी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरियो ।
शल्यक्रिया गर्नु अघि अवस्था
केही समय मुख खोल्न अलि सहज भएपनि पुनः पहिलाकै अवस्थामा कन्चटभित्रको जोर्नीमा हड्डी जोडिन पुग्यो। पहिलो शल्यक्रियामा सफलता मिलेन छोरीको उमेर जति जति बढ्दै गयो झन झन समस्या थपियो । छोरीको उपचारको खोजी गर्ने क्रममा गोरखपुर सम्म पुगियो, त्यहाँ भरपर्दो लागेन । खोजिकै क्रममा धुलिखेल अस्पतालको बारेमा पत्रपत्रिकामा पढेको थिए । त्यसैले धुलिखेल अस्पताल काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज (कुम्स ) को ओरल एण्ड म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी विभागका प्रमुख प्रा.डा.चन्दन उपाध्यायसँगको सम्पर्कमा आए । उहाँसँगको परामर्शपछि शल्यक्रिया गर्ने निर्णयमा पुग्यौ ।
ज्योत्सना भन्नुहुन्छ; म अहिले एकदमै खुशी छु । पहिला मुख खोल्न धेरै गाह्रो थियो, अब मुख खोल्न सक्छु । मेरो घाउँ निको भएपछि म सबैभन्दा पहिला मःमः सँगै खान्छु । पहिला मैले किमा निकालेर सानो सानो बनाएर चुसेर खानुपर्थ्यो । यस्तो समस्या कसैले पनि नलुकाउँनुस् खुलेर आउँनुस् धुलिखेल अस्पतालमा निःशुल्क मेटल उपलब्ध गराईदिनुहुन्छ ।
अस्पताल बसाइँ र शल्यक्रियाको शुल्क मात्र तिरे पुग्छ । यो उपचार २० देखि २५ लाख पर्ने रहेछ । मलाई पनि अस्पतालले मेटल निःशुल्क उपलब्ध गराएकै कारण उपचार सकिँदा १ लाखको हाराहारीमा मात्र खर्च भयो ।
डा. उपाध्यायका अनुसार दुबैपट्टीको ज्वाईन्ट फेरेको धुलिखेल अस्पतालको पहिलो बिरामी ज्योत्सना नै हुन् । यो हाम्रो लागि पनि नयाँ हो । यस्तो समस्या बाल्य अवस्थामा बालबालिका लड्दा अनुहार तथा च्यापुमा चोट लागेका कारण बढी हुन्छ । बाल्यकालमा लागेको चोटको असर उमेर बढ्दै जटिल बन्दै जान्छ । उमेर बढेसँगै कतिपयलाई मुख खोल्नै नसक्ने अवस्था आउँछ । यसको प्रमुख कारण उमेरसँगै शरिर बढेपनि चोट लागेको च्यापुको हड्डी नबढ्दा अनुहार समेत एकातर्फ बांगो हुँदै जान्छ । ज्याईनटमा जमेको रगत हड्डीसँग जोडिएर कडा हड्डी नै बन्दा यस्तो समस्या आउँछ । यो कुनै जन्मजातको समस्या, पूर्वजन्मको फल भन्ने जस्ता भ्रममा नपरी समयमै समस्याको पहिचान गरे उपचार सम्भव छ । सानै उमेरमा रुखबाट लड्दा, हड्डी खिईदा वा लड्दा जमेको रगत हड्डीमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि मुख खुल्दैन, खान सक्दैन, मुखको संक्रमण, अनुहार विग्रने, दाँतको जटिल समस्या चेतना र पैसाको कमीले गर्दा बढी हुन्छ ।
शल्यक्रिया पछि अवस्था
डा.उपाध्यायका अनुसार यो प्रविधि अत्यन्तै महंगो हुनुका साथै नेपालमा सम्भव नभएका कारण बिरामी र अस्पतालको मात्र प्रयासले उपचार सम्भव छैन । तर धुलिखेल अस्पतालले ज्योत्सनाको समस्याका बारेमा कोभिड १९ शुरु हुनु पहिले नै अष्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा उनको फोटो खिचेर पठायौ । कोभिडले गर्दा अष्ट्रेलियाबाट उक्त प्रविधि सहितको मेटल लिएर अष्ट्रेलियाबाट धुलिखेल अस्पतालमा आउँने भन्नुभएका मेडिकल टीममा ट्रेवर मोइलको पहलमा डा. एन्ड्रयु हेगी, डा .रिकी कुमार आउँन सक्नुभएन । उहाँहरु आउन नसकेपनि अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आउँने व्यक्तिका हातमा मेटल पठाएर थ्रीडीको फोटो प्रिन्ट गरि आदान प्रदान गरियो ।
पटक पटक भिडियो बैठकमा बस्यौ । त्यहि फोटोको आधारमा अष्ट्रेलियाको टीमले मेटल बनायो । ३ बर्ष अघि तयार पारेको मेटल यहि बैशाख २० गते धुलिखेल अस्पतालमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गर्न सफलता मिलेको‌ ज्योत्सनाको बंगाराबाट कन्चटमा जोडिएको जोर्नीले मुख खोल्ने, दाँतले चपाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । उनको च्यापुको हड्डी समेतमा समस्या आएकाले च्यापुमा पनि मेटल राखेर एकैपटक तीनवटा शल्यक्रिया गरियो ।
Tags: #government of NepalCorona Virus #Covid19DentrDhulikhel hospitalDr. Chandan Upadhaya